Njem ịga Okinawa, ebe okpomọkụ Japan | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Nduzi
Omenala ọdịnala anyị nwere nke Japan bụ ugwu, geisha, ụgbọ oloko ọsọ ọsọ, na igwe mmadụ, mana ọ bụghị ihe niile. Ọ bụrụ na i lee anya na map ahụ, ị ​​ga-ahụ otu agwaetiti dị anya site na agwaetiti ndị mejupụtara okinawa okomoko.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ akụkọ ntolite ụwa ị ga-echeta na agha ndị a lụrụ n’ọbara mere n’ebe a n’oge Agha Secondwa nke Abụọ, mana gafere isi ihe dị egwu a na-atụle mpaghara ahụ. Caribbean nke Japan: agwaetiti paradaịs, osimiri mara mma, okpomọkụ n'afọ niile na ọnọdụ izu ike na-akpọ gị ka ị zuru ike ma nwee obi ụtọ. Ma enwere ọtụtụ agwaetiti nke na ebe anyị bụ ndị mba ọzọ, anyị enweghị ike inye aka na-echegbu onwe anyị.
2 Mgbe ị ga-aga Okinawa
3 Otu esi aga Okinawa
4 Ihe ị ga-aga na Okinawa
Ọ bụghị otu agwaetiti kama ọ bụ otu agwaetiti mejupụtara ọtụtụ agwaetiti, ndị ukwu na ndị nta, ndị mmadụ na ndị mmadụ bi na ha. Ndị nọ ebe a na-asụ otu olumba ma nwee ọdịbendị nke ha dị iche na nke etiti Japan na nke ahụ nwere nkọwa: Okinawa bụ mba nweere onwe ya ogologo oge. Ọ bụ alaeze Ryukyu ma n'oge ahụ ọ gụrụ otu narị agwaetiti na-ekpo ọkụ nke dị kilomita 700 si Kyushu na Taiwan.
Ọnọdụ ihu igwe ya nke ọma mere ka agwaetiti ndị a bụrụ Ebe ezumike kachasị ewu ewu na Japan. Ọ bụrụ na anyị agbakwunye eziokwu ahụ na ha jikọtara ya na obodo ndị kachasị mkpa (Tokyo, Hiroshima, Osaka, Nagasaki, wdg), anyị nwere aka anyị ebe anyị na-aga ma eleghị anya ọ bụghị mgbe niile n'etiti ndị njem mba ọzọ mana ọ na-atụ aro nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị na-aga bụ Japan n'oge ọkọchị.
Mgbe ị ga-aga Okinawa
Ihu igwe nke agwaetiti ndị a bụ subtropical na nke ahụ pụtara na ọ na-ekpo ọkụ n’afọ niile, ọbụna n'oge oyi, ọ bụ ezie na ọ gaghị abụ ihe amamihe dị na ịgaghị na Jenụwarị ma ọ bụ na Febụwarị n'ihi na ọ bụ ezie na ọ bụ 20 ºC ọ dị urukpuru ma dịkwa jụụ ịbanye n'oké osimiri. N’agbata ngwụcha ọnwa Machị na Eprel bụ oge dị mma, mana ị ga -ezere ihe a na-akpọ Golden Week nke bụ ezumike nke ezumike ndị Japan n’ihi na ọ na-eju eju.
Oge udu mmiri na-amalite na Mee mmalite ma dịgide ruo na ngwụsị ọnwa Juun ka ọ ghara adaba n'ihi na mmiri na-ezo kwa ụbọchị. N'oge okpomọkụ na-anọgide, na-ekpo ọkụ ma na iru mmiri, ma ka ndị kasị njem nleta oge n'ihi na mgbe e mechara oge ifufe nke ahụ na-atụkwa ndị mmadụ ụjọ.
Otu esi aga Okinawa
Ekwesịrị ikwu ya ọtụtụ ụgbọ elu ndị dị ọnụ ala nwere ụgbọ elu na-ejikọ etiti Japan na Naha, isi obodo Okinawa. Gbọ elu ndị a na-adaba adaba n'ihi na ha nwere ike ịbụ gburugburu 90 euro ma ọ bụ obere na maka anyi ndi mba ozo, enwere ezigbo onyinye na anyị nwere ike ịzụta site na mpụga Japan.
Iji zoo ndị ụgbọ elu ndị a, ụlọ ọrụ kachasị ukwuu nwere tiketi pụrụ iche nke na-amalite ire, n'ozuzu, na Jenụwarị (na-eche mgbe niile maka njem n'oge ọkọchị), mana ọ bụrụ na ị gaa na weebụsaịtị nke ụgbọ elu ndị dị ọnụ ala ị ga-ahụ karịa awade na-enye afọ niile. M na-ekwu maka ụlọ ọrụ dịka Peach Aviation, dịka ọmụmaatụ, ọnụego malitere na $ 30. Ahịa!
Ugbo elu a na-ahapuru gi otutu na Naha, na kwa na agwaetiti Ishigaki na Miyako. Na-eche maka ụgbọ mmiri? Ọ bụghị ọtụtụ ụgbọ mmiri, ha belata ntakịrị n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya na ebe dị anya n'etiti agwaetiti ndị dị n'etiti na Okinawa buru ibu nke mere na ụgbọelu dịkwuo mfe. Ọbụna ụgbọ mmiri dị n’etiti agwaetiti ndị dị nso dị obere, ụgbọ elu na-abịa ma na-aga dị ka ụzọ kachasị esi ebu njem.
Ihe ị ga-aga na Okinawa
Ọ bụrụ na ị rute Naha, isi agwaetiti nke otu nwere otutu ebe nkiri ma ọ na-etinye uche na ndụ ndị obodo, mana ọ dị mma ịhapụ ya ka ụbọchị ole na ole gachara n'ihi na ọ bụrụ na ị na-achọ ịma mma Caribbean ị ga-aga agwaetiti ndị ọzọ.
na Agwaetiti Keramadịka ọmụmaatụ, ha bụ ebe dị mma. Ha dị ihe dị ka kilomita iri atọ site na Naha, ha bụ agwaetiti kacha nso: agwaetiti 30 buru ibu na obere agwaetiti nke aja na coral nke na-eme akwụkwọ ozi mara mma na ebe dị mma iji banye mmiri na mmiri. Ruo oge ụfọdụ, njem bịara too n'ihi nkwụsịtụ nke ụgbọ mmiri si Naha ruo agwaetiti Yaeyamas na Miyako, yabụ mgbe a bịara n'ịme njem dị mkpirikpi ndị mmadụ na-ahọrọ ịbịa ebe a.
Agwaetiti ndị ọzọ dị nso na Naha bụ Iheya Islands, agwaetiti nwere ọtụtụ akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị, na Ndewo, nke jikọtara nke mbụ site na akwa mmiri. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ntakịrị akụkọ ntolite Okinawan, agwaetiti abụọ a bụ ezigbo ebe. Ihe ọzọ i nwere ike ịma bụ Utezọ gafere n'oké osimiri o Kaichu-doro. Ọ bụ a njem njem ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita ise nke jikọtara Yokatsu Peninsula na agwaetiti etiti jikọtara ya na agwaetiti Henza. Ọ bụ ụzọ kachasị mma iji ụgbọ ala.
Ebe ọzọ bụ Agwaetiti Ishigaki-Jima ma site ebe ahụ i nwere ike iji ụgbọ mmiri gaa na Agwaetiti Taketomi. na Agwaetiti Kumejima Ọ dị naanị kilomita 90 ma na-enye nzọ ụkwụ nke osimiri ndị mara mma, nke kachasị mma bụ Hatenohama, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịbịaru ya naanị site na njem. Kedu ka ị ga-esi banye n'àgwàetiti a? Site n'ụgbọ elu, enwere ụgbọ elu isii na asatọ kwa ụbọchị, naanị ụgbọ elu elekere ọkara, site na Naha ma ọ bụ site na ọdụ ụgbọ elu Haneda n'oge ọkọchị enwere otu ụgbọ elu kwa ụbọchị. Hagbọ mmiri si Naha na-enye ọrụ abụọ kwa ụbọchị na-agaghị agafe elekere anọ.
Ozugbo anyị nwere agwaetiti, anyị nwere ike ịgbazite ụgbọ ala, ọgba tum tum ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe. Ma ọ bụghị, enwere agwaetiti ndị ọzọ dị oke ọnụ ahịa mana ọ bụ ezie na a maara ha ma kwado ha ha enweghị ebe dị nso na Naha. Ana m ekwu maka ndị Miyako, dịka ọmụmaatụ, paradaịs nke dị, ọ dị mwute, kilomita 300 site na. Rygbọ mmiri anaghị arụ ọrụ ọzọ otu ụzọ ịmara ha bụ ịbịa ụgbọ elu.
Ajụjụ bụ nke a: ọ bụrụ na ị nwere obere oge ọ ga-adị mma ịdabere na Naha, nwee obi ụtọ ya ihe dị ka ụbọchị atọ ma wụpụ n'àgwàetiti ọzọ dị nso iji nwee mmekọrịta chiri anya na ọdịdị mara mma nke ebe ahụ. Naha na-enye ndụ abalị, ebe akụkọ ọdịnala, gastronomy, na mma nke obodo Japan. Agwaetiti ndị ọzọ, ọ bụ ezie na ha nwere ọnụ ọgụgụ ndị bi na nke ha, nwere onyinye ndị ọzọ.
Ọ bụrụ n'inwekwu oge, ihe kachasị mma bụ ịnọ ụbọchị ole na ole na Naha wee nọrọ otu n'ime agwaetiti ndị a dịpụrụ adịpụ ma mara mma, mana anyị na-ekwu maka ihe karịrị otu izu ịnọ, ihe na-adịkarị obere mgbe ị na-aga njem Japan.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Nduzi » Njem ịga Okinawa, ebe okpomọkụ Japan